ICold Atom Space Payload Accelerometer ihlose ukuthuthukisa ukumodeliswa kwesimo sezulu - Micro-Semiconductor.com
Inhloso ngukuthi izinzwa zizothuthukisa ukuqonda kwesayensi ngamandla okushintsha kwesimo sezulu futhi ziqhubekele phambili ekumodelaneni kwesimo sezulu, ukubikezela isimo sezulu kanye nokubikezela i-satellite orbit.
Le nkampani isebenza ngokubambisana ne-STFC RALSpace ne-University of Birmingham.
UTeledyne e2v uyabhala:
Umkhathi womhlaba ongaphezulu yisifunda esisebenza kakhulu esidlala indima enkulu ekudlulisweni kwamandla kweplanethi, okuthonya isimo sezulu nesimo sezulu. Ukuqonda amandla womkhathi ongaphezulu woMhlaba kuzoncika esilinganisweni esibucayi ngokwedlulele samandla asebenza kusathelayithi eklanywe ngokukhethekile njengoba idlula emkhathini onqabile we-Very Low Earth Orbit.
Ama-accelerometer amasha asuselwa endaweni yobuchwepheshe be-quantum esebenzisa ama-athomu e-alkali, apholiswe ngama-lasers asondele ku-zero ngokuphelele, ngaphandle kokusebenzisa ama-cryogenics.
Le phrojekthi izokwakha emsebenzini wangaphambilini weTeledyne e2v wokwakha i-CASPA CubeSat, ekhombise isicupho se-athomu ebandayo futhi emele isinyathelo sokusebenzisa ama-athomu abandayo ekusetshenzisweni kwesikhala.
Isiphakamiso sikaTeledyne e2v sethuluzi elisuselwa esikhaleni likhethwe ngokuncintisana okuvulekile kwe-13th Earth Observation (EO) Technology Call, ephethwe yiCentre for Earth Observation Instrumentation (CEOI), okuyi-partnership ye-Airbus Ltd, iQinetiQ Ltd, i-STFC Rutherford I-Appleton Laboratory neYunivesithi yaseLeicester.
Ungafunda kabanzi mayelana nohlelo lwe-UK National Quantum Technology Program lapha.
Isithombe: Teledyne e2v Umbonisi weCASPA